किन गर्छ भाटभटेनी सुपर मार्केटले यस्तो? – MySansar
किन गर्छ भाटभटेनी सुपर मार्केटले यस्तो?
Posted on June 15, 2017 June 15, 2017 by mysansar
भाटभटेनी सुपरमार्केटमा खरिद गर्दा बिलमा ध्यान दिनुपर्ने बारे माइसंसारको ब्लग पढेँ। जानकारीको लागि धन्यवाद छ। म पनि भाटभटेनीको नियमित ग्राहक हुँ। भाटभटेनीप्रति मेरो पनि एउटा गुनासो छ। आशा छ तपाईँले यो गुनासो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याइदिनु हुन्छ होला। भाटभटेनीको ग्राहक भएकोले मलाई सदस्यता स्वरूप एउटा क्लब कार्ड दिइयो।
त्यहाँ सामान खरीद रकमको आधारमा कार्डमा अंक प्राप्त हुन्छ। उक्त अंक २०० पुगेपछि रु १५ सय बराबरको गिफ्ट भौचर प्रदान गरिनेछ भनेर भनिएको थियो मलाई।
मेरो कार्डमा २०० भन्दा बढी भएको बर्ष दिन कटिसक्यो तर मैले भौचर पाएको छैन।
धेरै पटक कोटेश्वर शाखामा सोधेँ। तर जहिले पनि तपाईलाई फोन आउँछ भनेर मात्र जवाफ पाइन्छ। किन यस्तो? यदि दिनु छैन भने किन ढाँट्ने? किन गर्छ भाटभटेनीले यस्तो? कृपया सर्वसाधारणलाई जानकारी गराई दिनु होला। आशा छ, भाटभटेनीको जिम्मेवार व्यक्तिबाट यसको जवाफ पनि पाइनेछ। धन्यवाद।
यसकारण अब म कहिल्यै भाटभटेनी सपिङ सेन्टरमा जाँदिन
5 thoughts on “किन गर्छ भाटभटेनी सुपर मार्केटले यस्तो?”
भाटभटेनीले ठग्यो , एस्तो नराम्रो , उस्तो नराम्रो गर्यो भनेर कुरा गर्ने अनि त्यही गएर बारम्बार shopping गर्नै पर्ने बानि छुटाउ / कोहि पनि त्यहाँ नगए भईगयोनि अनि हेरौत कसलाई ठग्दो रहेछ / सबै जना एकजुट भएर त्यहाँ नजाने हो भने “they will realise they cant survive without customer “
सन्देश आचार्य says:
भाटभटेनिको भाटभटेनि जानुभएको छ ? साँघुरो सिढी, एउटा मात्र प्रवेश/बाहिर निस्कन मिल्ने ठाउँ छ । त्यहाँ सधैजसो सयौ ग्राहकको भिडभाड हुने गर्छ (शुक्रबार, शनिबार त लगभग हजार जती) । आगलागी वा यस्तै आपतकाल केहि भै आएमा त्यहि एउटा मात्रै साघुरो स्थान हो सबै जनाले प्रयोग गर्नुपर्ने । सुरक्षित बाहिर निस्कने विकल्प नै छैन । अलि सबल राज्य वा सभ्य समाजमा भएको भए बैकल्पिक आपतकालीन द्वार नहुदा सम्म यो पहिलो दिन मै संचालनमा रोक लगाइने थियो । यहाँ बर्षौ भयो यस्तै चलिराछ ।
Dikshant Ghimire says:
Please contact the naxal branch, 4th floor. I got my voucher from there while i usually shop at the pulchowk bhatbhateni
वर्ष दिन रे? मेरो ३ हुन लाग्यो। भाटभट्भटेनि चोर…
पोखरा को भाट भेटनी मा त पाए. मेरो पनि २०० नागेको थियो. अलि समय लियो १५०० बराबर को शपिंग फ्री भए को थियो